Ny famaritana dia voasivana ny Moto M | Vaovao momba ny gadget
Rehefa hifarana ny taona isika dia efa natolotry ny mpanamboatra be ny terminal izay tadiavin'izy ireo hahatratra ny isan'ny mpampiasa indrindra, indrindra raha miresaka momba ny farany isika, na dia tsy nanao tsara aza i Samsung taorian'ny nanerena azy ireo esory ny Note 7 noho ny olana momba ny fipoahana, olana izay toa nitatra tamin'ireo milina fanasan-damba, araka ny nampahafantarinay anao anao andro vitsivitsy lasa izay. Rehefa misy andro vitsivitsy sisa hanoloran'i Motorola ny terminal Moto M vaovao, ny endri-javatra manan-danja indrindra amin'ity terminal vaovao ity dia voasivana, izay tadiavin'ilay orinasa hahomby amin'ity Krismasy ity.
Ny fahatongavan'i Moto G4 sy G4 Plus teny an-tsena dia niteraka fahatezerana lehibe tamin'ny mpampiasa maro satria nampitombo ny vidin'ny orinasa raha ampitahaina amin'ny taranaka teo aloha, zavatra iraisan'ny mpanamboatra rehetra, fa izay misarika ny saina bebe kokoa amin'ny fantsona mora vidy kokoa. Ny Moto M vaovao dia hamely ny tsena amin'ny vidiny manakaiky ny 265 euro, saingy amin'izao fotoana izao dia tsy fantatsika hoe rahoviana izany.
Moto M famaritana
Ity terminal Motorola vaovao ity dia hamely ny tsena amin'ny efijery 5-inch sy ny vahaolana Full HD. Amin'ity indray mitoraka ity ny processeur dia ny Helio P15, avelany hijanona ny Qualcomm ary misafidy ny orinasan'ny Mediatek, izay efa nahomby tamin'ny taona vitsivitsy. Amin'izany fomba izany i Motorola dia manatevin-daharana ny lisitr'ireo mpanamboatra izay mamela an'i Qualcomm ankoatrany, miaraka amin'i Samsung sy Huawei, izay manomboka mampiasa ny solo-dry zareo manokana.
Ao anatiny no ahitantsika RAM 4 GB, fakan-tsary 16 mpx aoriana ary fakan-tsary mpx eo aloha. Tsy azonao atao ny tsy mahita ny fantsom-panafody izay eo akaikin'ny fakantsary aoriana. Eo amin'ny lafiny fitehirizana, ny Moto M dia hanolotra fahatsiarovana anatiny 32 GB azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny karatra microSD sy bateria 3.050 mAh. Hamely ny tsena amin'ny Android M, miaraka amin'ny fanavaozana ny Android Nougat.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Mivoaka ny famaritana Moto M
Sarimihetsika inona no jerena ao amin'ny Netflix amin'ny oram-be orana (toy ny anio)